Enwere ike ịmepụta Apple ID n'ụzọ atọ dị iche iche | Esi m mac
Echeghị m na ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Apple amaghi na ebe a na Apple ID bụ ọnụ ụzọ ihe ọ bụla metụtara onye ọrụ gị n'ime usoro okike Apple. Site na Apple ID ị nwere ike ịnweta data gị, zụta ihe na ebe nrụọrụ weebụ Apple, zụta ihe na ụlọ ahịa ụlọ ọrụ dị iche iche, yana ịnweta ozi ịntanetị gị, foto na ọbụlagodi kpọghee ekwt.
Na nkenke, na Apple ID dị mkpa karịa ka anyị chere na ọ bụ ya mere Apple n'onwe ya, kemgbe ọtụtụ afọ, na-emeziwanye nchebe ya na mbata nke nyocha abụọ, ihe na-eme ka Apple ID ghara ịnweta ya mgbe ụfọdụ. onye nwe echefuru igodo.
Isiokwu a ga-abụ nke mbụ n’ime ọtụtụ ndị ọzọ m chọrọ ilekwasị anya otu esi emepụta ma jikwaa Apple ID na ọ bụ na izu ndị gara aga enweela ọtụtụ oge na m ga-arahụ iji nwee ike ịnapụta ụfọdụ Apple ID n'aka ndị ọrụ ibe ha echefuru paswọọdụ ha.
Ihe mbụ ị ga-amata bụ na Apple ID, mgbe ịzụrụ ihe ọhụrụ Apple, ị nwere ike ịnwe ya n'ihi na ị mepụtara ya na mbụ, n'ihi na ọ bụghị oge mbụ ịzụrụ ngwaahịa apụl. ma ọ bụ na ị ga-emepụta ọhụrụ Apple ID.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta Apple ID ọhụrụ ị ga-ama nke ahụ e nwere ụzọ atọ dị iche iche inwe ike ịmepụta Apple ID ọhụrụ:
Ọ bụrụ na ihe ị zụtara bụ ngwaọrụ mkpanaka Apple dịka iPad, iPhone ma ọ bụ iPod Touch, ị nwere ike ịmepụta Apple ID gị na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya ma ọ bụrụ na ị rute na ihuenyo akọwapụtara na ị chọrọ ịmepụta Apple ID ọhụrụ na oge ahụ. Usoro nke ngwaọrụ ndị a ga - eduzi gị site na ajụjụ ọnụ iji jedebe Apple ID zuru oke. Otu ihe ahụ ga-eme gị ma ọ bụrụ na ihe ị zụtara bụ Mac.
Ọ bụrụ n'ịchọghị ime ya na ngwaọrụ ahụ, ịnwere ike iji ngwa iTunes, ma na Mac na PC ma laa, ozugbo ngwa ahụ mepere, gaa na menu elu wee pịa Akaụntụ> Banye ...
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịnweghị ohere inwe iTunes na kọmputa gị, maka ihe kpatara ya ma ịchọrọ ịmepụta Apple ID na-enweghị ka ịnwe ngwaọrụ mkpanaka, ịnwere ike ịbanye websaịtị www.icloud.com na site na mgbe ị banyere Ga-ahụ na web ị nwere ike ịmepụta Apple ID.
Olee otu i si kee Apple ID mbụ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Enwere ike ịmepụta Apple ID n'ụzọ atọ dị iche iche
Feral Interactive na-ekwupụta Warhammer 40,000: Dawn of War III for Mac